Maanta & Cadaado: Guddoomiyaha Maxkamadda Sare iyo Doorkiisa Xal Raadin – Radio Daljir
Maanta & Cadaado: Guddoomiyaha Maxkamadda Sare iyo Doorkiisa Xal Raadin
Oktoobar 3, 2017 2:50 b 0
Kaddib markii uu Madaxweyne Xaaf 29kii bisha Siteenbar soo saaray amar lagu mamnuucay duulimaadka diyaaradaha isaga goosha Xamar iyo Cadaado ayaa ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ii xaqiijiyeen in amarkaas maanta loo looday Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Galmudug, Yaxye Shiikh Cali.
Guddoomiye Yaxye oo warbaahinta kula hadlay garoonka Cadaado ayaa ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee Galmudug ee hadda karka ku dhow, sheegayna in ciddii ku xadgudubta dastuurka Galmudug sharciga lala tiigsan doono, lagana aqbali doonin qalalaase sii dabadheeraada.
Guddoomiyaha ayaa xaqiijiyey in 25 xildhibaan oo Maxkamada Sare ee Galmudug looga yeeray ay qayb ka ahaayeen qaska, fowdada, iyo xiisadda siyaasadeed ee ka curatay Galmudug.
Uyeeridda Xildhibaanada ayaa hadda dhalisay su’aalo horleh oo aan horay siyaasiyiinta Galmudug maankooda uga guuxin.
Siyaasiyiinta deegaanka oo aan arrinkaan midmid si qoto dheer uga waraystay ayaa hadda qiraya, isna weydiinaya su’aalaha hoose iyo sidii jawaab loogu heli lahaa:
Hay’adda Garsoorku waa ay ka madaxbanaantahay Golaha Fulinta iyo Baarlamaanka, sidaas darteed waa muhiim in Maxkamadda Sare aan loo arag mid ku dhexmilanta dhinacyada ishaya, ha ahaato Golaha Fulinta ama kan Shacabka?
Sharciyan Maxkamada Sare ee Galmudug ma ay u yeeri kartaa Xildhibaanada shacabka oo ayagu leh xasaanad iyo matalaad shacab oo faragelin ka reebban?
Mar haddii arrinka qalafsan ee Galmudug uu hadda u muuqdo mid albaabka sharciga u sii dhutinaya, siyaasiyiinta qaar ayaa hadda isweydiinaya su’aasha: maxaa kallifay garoon 4 maalmood ku xirnaa amar Madaxweyne in si dadban amarkaas loo laalo, garoonkana loo furo Guddoomiyaha Maxkamadda Sare, Md. Yaxye Shiikh Cali? Maanka ku hay in su’aasha kore ee koowaad ay siyaasiyiinta qaarkood uga digeen Guddoomiye Yaxye si uusan ugu dhexmilmin siyaasadda iyo isqabqabadka labada gole.
Siyaasiyiinta aan maanta illaa iyo caawa waraystay qaarkood waxayba qiimeeyeen in Guddoomiye Yaxye uu hadda la saftay garab kamid ah labada garab ee isku haya siyaasadda Galmudug, uuna u janjeersaday dhanka Madaxweyne Xaaf (ama Madaxweyne Casilan Xaaf).
Siyaasiyiinta iyo waliba xildhibaanada ayana qaar baa leh, weli waxba lama hubo ee Guddoomiyaha yaan dhinacna lagu riixin.
La soco maqaaladda danbe ee Maanta iyo Cadaado.
Ciidamadda Dowladda Somaaliya oo Howlgal kasameyeey Muqdisho
DFS oo Sacuudiga uga Mahadcelisey Taageerada iyo Garabka Joogtada ah